राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अंन्सारीले तराई-मधेसमा अधिकारका लागि भइरहेको आन्दोलनमा राज्यले दमन गरेको बताएकी छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरुहरुसँग छलफल गर्दै मानवअधिकार आयोगको टोली कलैया-१० रंगपुरका २५ वर्षीय हिफाजत मियाको गत मंगलबार प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएपछि सोको वास्तविकता बुझ्न आयोगको टोली कलैया आएको छ ।
सप्तरीका दुई सरकारी कार्यालयमा आगजनी
सप्तरी, भदौ १७ – संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले सप्तरीका दुई वटा सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् ।
आन्दोलनको क्रममा पत्रकारमाथि भएका आक्रमणप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति
काठमाडौं, भदौ १७ – देशका विभिन्न ठाउँमा भैरहेका आन्दोलनमा पत्रकारमाथि आक्रमण, धम्की, दुर्व्यवहार भएको तथा सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध गर्ने क्रम बढ्दै गएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको जनाएको छ ।
काठमाडौं–एमाओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य प्रभु साहले सरकारले सुरक्षा निकाय लगाएर मधेसी जनतामाथि सुनियोजित रुपमा दमन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
थरुहटको आन्दोलन लम्बियो, जनजीवन कष्टकर
बर्दिया, भदौ १७ – कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट स्वायत्त प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गर्दै गएको २४ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रेको थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनको कार्यक्रम थप गरेको छ ।
थारुलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्न नसक्ने एमाओवादी निष्कर्ष केपी ओली र माधव नेपालसँग प्रचण्डको गोप्य वार्ता
१६ भदौ, काठमाडौं । एमाओवादीले थारु समुदायलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षका साथ दलहरुसँग सहमतिको प्रयास थालेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका शीर्ष नेताहरुले बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा र नेता माधवकुमार नेपालसँग गोप्य भेट गरेका छन् ।
पूर्वी क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं, भदौ १३ – आज पूर्वका केही ठाउँमा भारी वर्षा हुने मौसमविद्ले बताएका छन् । अन्तको तुलनामा पूर्वमा मनसुन सक्रिय रहेकाले त्यस क्षेत्रमा अहिले पनि पानी परिरहेको मौसमविद् राजु प्रधानांगले जानकारी दिनुभयो । बंगाल र झारखण्डमा पानी पार्ने न्युनचापीय रेखा विकसित भएकाले पूर्वमा मनसुन सक्रिय भएको हो । मौसमविद् प्रधानांगका अनुसार आज मध्य र पश्चिममा क्षणिक वर्षा हुने अनुमान छ ।
चार दलको बैठक चल्दै
१३ भदौ, काठमाडौं । वार्ताका लागि आन्दोलनरत पक्षले राखेको सर्तबारे छलफल गर्न प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक अहिले बसिरहेको छ । बालुवाटारमा जारी बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताका लागि मधेसी मोर्चा, थरुहट संघर्ष समिति लगायतले राखेको सर्तबारे जानकारी गराएका छन् । मधेसी मोर्चाले वार्ताका लागि चारबुँदे सर्त राखेका छन् । जसमा संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्नु पर्ने, विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नु पर्ने लगायतका छन् । थरुहट संघर्ष समिति र मधेसी मोर्चाले वार्ताका लागि सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई ब्यारेकमा फिर्ता गर्नु पर्ने
दोलखामा पनि पराकम्प
काठमाडौं, भदौ १३ – आइतबार दुईवटा पराकम्प गएको छ । बिहान ८ बजेर २६ मिनेटमा दोलखा केन्द्रबिन्दु भएर ४ दशमलव १ रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको छ । यसअघि बिहान ३ बजेर ९ मिनेटमा पनि धादिङ केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव ३ रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि ४ रेक्टर स्केल माथिका ३ सय ८६ पटक पराकम्पन गैसकेको छ ।
संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथिको छलफल आज सकिंदै
काठमाडौं, भदौ १३ – संविधानसभामा संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथिको छलफल आज सकिंदैछ । सैद्धान्तिक छलफल सकिएलगत्तै संशोधनको लागि सात दिनको समय दिने संविधानसभा सचिवालयको तयारी छ । मुख्य तीन दलले व्यक्तिगत रुपमा संशोधन प्रस्ताव नराख्न आआफ्ना सभासदलाई निर्देशन दिएका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रिया र असन्तुष्ट पक्षसँगको वार्तालाई सँगसँगै लैजाने बताएका मुख्य दलहरुको बैठक पनि आज बस्दैछ । बैठकमा असन्तुष्ट दल र पक्षसँग वार्ता अघि बढाउनेबारे छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् । वार्तामा बस्न थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले
केसीको आन्दोलनमा डा भट्टराई को ऐक्यबद्दता
काठमाडौं, भदौ १३ – एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति हटाउन लामो समयदेखि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीलाई उनी अनसनरत त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमै पुगेर आइतबार बिहान भेटेका छन् । सरकारले विगतमा गरेको बाचा पूरा नगरेको भन्दै गत शुक्रबारदेखि अनसन थालेका डा. केसीको आन्दोलनमा आफ्ना र पार्टीको समर्थन रहेको जनाउँदै भट्टराईले सरकारप्रति आक्रोस पोखेका छन् । ‘तपाईंलाई गाह्रो छ, पटक–पटक अनसन बस्नु परेको छ ्, तर राज्य कसैको कुरा सुनुवाई गर्दैन,’ भट्टराईले केसीसँग भने, ‘तपाईंको माग आज बस्ने चार
आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुको वार्ताका निम्ति संविधान निर्माणको जारी प्रक्रिया रोक्नुपर्ने शर्त सरकारले अस्वीकार गरेको छ। प्रक्रिया रोक्नुपर्ने लगायतका शर्तसहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले शनिबार पत्र पठाएपछि मोर्चाका प्रतिनिधिहरुसँग प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारको उक्त धारणा सुनाएको एकजना मन्त्रीले बताए। सत्ताधारी दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका एक नेताले पनि वार्ताको नाममा संविधानसभालाई बन्धक बनाउन नसकिने तर्क गरेका छन्। तराई केन्द्रित दलहरुको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले विगतमा आफूहरुसँग भएका सहमति कार्यान्वयन, सेना परिचालन फिर्तालगायत संविधानसभामा जारी प्रक्रिया नरोकिए वार्ता हुन नसक्ने बताएको छ। शर्त प्रधानमन्त्रीले वार्तामा आउन
मालागामाथि बार्सिलोनाको संघर्षपूर्ण जित
१३ भदौ, काठमाडौं । थोमस भर्मालिनको गोलको मदतमा बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले मालागालाई पराजित गरेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले मालागामाथि १–० को संघर्षपूर्ण जित हात पारेको हो । बार्सिलोनाका तीन स्ट्राइकर लिओनल मेस्सी, लुइस स्वरेज र नेयमार एकसाथ खेलिरहेका थिए । सबैको नजर उनीहरुमाथि नै थियो तर, विजयी गोल भर्मालिनले गरे । भर्मालिनले ७३ औं मिनेटमा गोल गरेका हुन् । गत सिजन आर्सनलबाट बार्सिलोना गएका भर्मालिनको क्लबका लागि यो पहिलो गोल समेत हो । त्यसअघि दोस्रो हाफमा मालागाका गोलरक्षकले
आज अन्तराष्ट्रिय बेपत्ता दिवस मनाइँदै
१३ भदौ, काठमाडौं । आज ३० अगस्ट अर्थात् बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ तर सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिस अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्त अझै पनि आफ्ना मान्छेहरु आउने आशामा पर्खिरहेका छन् तर यतिका वर्ष बिति सक्दा पनि नआउँदा पीडा थप बढेको छ बेपत्ता भएका आफ्ना पति (सुचिन्द्र महर्जन, तत्कालीन एमाओवादी नेता) अझै आउने आशामा छिन सभासद् रुपा महर्जन
काठमाडौं, भदौ १३ – आज गाईजात्रा । भाद्रकृष्ण अष्टमीसम्म मनाइने गाईजात्रा पर्र्व काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटै सहरसहित देशका मुख्य मुख्य सहरमा मनाउने गरिन्छ । एक वर्षअघिदेखि दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा गाई सिँगारी सहर घुमाएर यो पर्व मनाउने गरिन्छ । गाईलाई घुमाउने क्रममा श्रद्धालु भक्तजनले दूध, फलफूल, रोटी, दहीचिउराका साथै अन्य परिकार पनि खुवाउँछन् । किंवदन्ती वा इतिहासअनुसार राजा प्रताप मल्लका पुत्रको अल्पायुमै निधन भएपछि रानीले धेरै बिलौना गर्न थालिन् । लामो समयसम्म शोक गरेर बसेपछि ‘यस्तो शोक तिमीलाई मात्र परेको होइन’ भन्ने
काठमाडौं, भदौ १३ – आइतबार बिहान सबैरै भूकम्पको पराकम्प गएको छ । विहान ३ बजेर ९ मिनेटमा धादिङ केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव ३ रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि ४ रेक्टर स्केल माथिका ३ सय ८६ पटक पराकम्पन गैसकेको छ ।
टीकापुर घटना ः मेरो डेढ वर्षको छोराको के दोष थियो ?
कैलाली, भदौ १२– मेरो डेढ वर्षको अबोध बालकको के दोष, किन मार्नुपरेको होला सर ? टीकापुरमा गत सोमबार भएको घटनामा मृत्यु भएका बालक टेकबहादुरकी आमा यशोदा साउद सबैसँग यसरी नै प्रश्न गरिरहन्छिन् । गहभरि आँसु निकाल्दै उनले माग गरिन् – समाज र संसारका बारेमा अनभिज्ञ रहेको मेरो छोराको हत्यारालाई फाँसीको सजाय हुनुपर्छ र छोरालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्छ । टीकापुरमा डेढ वर्षीय बालक र आठ प्रहरीको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको घटनाप्रति यतिबेला स्थानीयवासी आक्रोशित पनि छन्, चिन्तित पनि देखिएका छन् । दिउँसो भएको घटनामा डेढ
यु-१९ एसिसी क्रिकेट : नेपाल अफगानस्तानसँग १० विकेटले पराजित
काठमाडौं, भदौ १२ – (अपडेट) उन्नाईस वर्ष मुनिको एसिसी प्रिमियर लिग क्रिकेटमा नेपाल अफगानिस्तानसँग १० विकेटले पराजित भएको छ । मलेसियाको किनरारा ओभल मैदानमा नेपालले दिएको १ सय २४ रनको लक्ष्य अफगानिस्तानले २५ ओभरमा कुनै विकेट नगुमाई भेट्टायो । अफगानस्तानका हजरुतल्लाह ६८ र नासिर खान ५७ रनमा नटआउट रहे । नेपालले ६ जना बलरलाई प्रयोग गरेपनि कसैले विकेट लिन सकेनन् । यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ४७ ओभर ५ बलमा मात्र १ सय २३ रन बनायो । नेपालका लागि
यू-१९ साफ च्याम्पियनको उपाधिका लागि नेपालले भारतको सामना गर्दै
१२ भदौ, काठमाडौं । साफ यू १९ च्याम्पियनसीपको उपाधिका लागि शनिबार नेपालले भारतको सामना गर्दै छ । सातदोबाटोस्थित अखिल नेपाल फूटबल संघ एन्फा एकेडेमीको मैदानमा दिउँसो साढे तीन बजेपछि हुने खेलमा नेपाली टोली ट्रफी उठाउने लक्ष्यका साथ मैदान प्रवेश गर्दैछ । नेपालका लागि दक्षिण एसिउयाली प्रतियोगितामा सँधै बाधक बनेको भारतलाई आजको खेलमा पराजित गर्ने नेपाली खेलाडीको दाबी छ । उनीहरुले यसअघि कमजोर देखिएको मिडफिल्ड र डिफेन्समा सुधार ल्याउने बताएका छन् । नेपाल र भारत जारी प्रतियोगिताका अपराजित टोली हुन् । नेपालले समूहचरणमा भुटान
अाज जनैपूर्णिमा मनाइँदै
१२ भदौ, काठमाडौँ । श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका अवसरमा शनिबार जनैपूर्णिमा तथा ऋषितर्पणी पर्व मनाइँदैछ । प्रत्येक वर्षको श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका अवसरमा जनैपूर्णिमा पर्व मनाउने प्रचलन रहिआएको छ । यसै दिन आत्माको शुद्धीकरण र शरीरको रक्षाका लागि ब्राह्मण पुरोहितको हातबाट नाडीमा रक्षाबन्धन बाँध्ने प्रचलन रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णयक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले बताए । “शास्त्रीय मान्यताअनुसार विशेषगरी तागाधारी (ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य) वर्गले वर्षदिन वेद पढ्नुपर्ने र त्यसको साङ्गे (समाप्ति)को दिनका रुपमा जनै पूर्णिमालाई लिइन्छ,” उनले भने –“यस दिन स्नान गरी सप्तऋषिसहित ब्रह्मा